“အသည်းကွဲတာလေးပဲ ကမ္ဘာကြီးကွဲသွားတာမှ မဟုတ်တာဆိုတဲ့ မြတ်သူသူ” – Cele Gabar
ပရိသတ်တွေက”မြညိုလေး”လို့ ချစ်စနိုးနဲ့ ခေါ်ဆိုကြတဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးလေး မြတ်သူသူကတော့ (၆)နှစ်နီးပါးလက်တွဲလာခဲ့တဲ့ ချစ်သူနဲ့ လတ်တလောမှာ အဆင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပြီး သူရဲ့ မပျော့ညံ့တဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကို ပြသရင်း “အသည်းကွဲတာလေးပဲ ကမ္ဘာကြီးကွဲသွားတာမှ မဟုတ်တာ…. လူချင်းကွဲသွားတာလေးပဲ အသည်းနှလုံးပြဲသွားတာမှမဟုတ်တာ …. တွဲလက်ချင်းဖြုတ်လိုက်တာလေးပဲ အသက်ကိုနုတ်လိုက်တာမှမဟုတ်တာ …. သံယောဇဉ် ဖြတ်သွားတာလေးပဲ ဦးနှောက်ပြတ်သွားတာမှမဟုတ်တာ ….
ဒီတယောက်နဲ့လွဲသွားတာလေးပဲ နောက်တယောက်နဲ့ ပြန်တွဲလို့မရတာမှမဟုတ်တာ ….. ရေစက်ကုန်လို့ တွဲလက်ဖြုတ် ကြတော့တဲ့အခါ ကောင်းသောလမ်းခွဲခြင်းဆို အမှတ်တရလို့ သဘောထားလိုက်ပါ …..ဆိုးသောလမ်းခွဲခြင်းဆို သင်ခန်းစာလို့ သဘောထားလိုက်ပါ ….. နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာလာတဲ့အခါ အမှတ်တရ ဆိုတာ ရယ်စရာပါ …. သင်ခန်းစာ ဆိုတာ သံဝေဂရစရာပါ ….” လို့ သူရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။မြတ်သူသူဟာ အနုပညာအလုပ်တွေအပေါ်အလေးထားမှုနဲ့ ကျရာဇာတ်ရုပ်တိုင်းကို ပီပြင်စွာသရုပ်ဆောင်နိုင်မှုတို့ကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လတ်တလောမှာလည်း မြတ်သူသူကတော့ “သန်းသန်းဆွေ”ဆိုတဲ့ ကာရိုက်တာနဲ့ “တို့မမနဲ့တို့”ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးလေး မြတ်သူသူကတော့ (၆)နှစ်နီးပါးလက်တွဲလာခဲ့တဲ့ ချစ်သူနဲ့ လတ်တလောမှာ အဆင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့နေရပေမယ့်လည်း စိတ်ခွန်အားအပြည့်နဲ့ ပရိသတ်အတွက် အနုပညာအလုပ်တွေပိုမို လုပ်ကိုင်နေပါတယ်နော်။
“အသည္းကြဲတာေလးပဲ ကမာၻႀကီးကြဲသြားတာမွ မဟုတ္တာဆိုတဲ့ ျမတ္သူသူ”
ပရိသတ္ေတြက”ျမညိဳေလး”လို႔ ခ်စ္စႏိုးနဲ႔ ေခၚဆိုၾကတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသမီးေလး ျမတ္သူသူကေတာ့ (၆)ႏွစ္နီးပါးလက္တြဲလာခဲ့တဲ့ ခ်စ္သူနဲ႔ လတ္တေလာမွာ အဆင္မေျပမႈေတြႀကဳံေတြ႕ေနရတာျဖစ္ၿပီး သူရဲ႕ မေပ်ာ့ညံ့တဲ့စိတ္ဓာတ္ေလးကို ျပသရင္း “အသည္းကြဲတာေလးပဲ ကမာၻႀကီးကြဲသြားတာမွ မဟုတ္တာ…. လူခ်င္းကြဲသြားတာေလးပဲ အသည္းႏွလုံးၿပဲသြားတာမွမဟုတ္တာ …. တြဲလက္ခ်င္းျဖဳတ္လိုက္တာေလးပဲ အသက္ကိုႏုတ္လိုက္တာမွမဟုတ္တာ …. သံေယာဇဥ္ ျဖတ္သြားတာေလးပဲ ဦးေႏွာက္ျပတ္သြားတာမွမဟုတ္တာ ….
ဒီတေယာက္နဲ႔လြဲသြားတာေလးပဲ ေနာက္တေယာက္နဲ႔ ျပန္တြဲလို႔မရတာမွမဟုတ္တာ ….. ေရစက္ကုန္လို႔ တြဲလက္ျဖဳတ္ ၾကေတာ့တဲ့အခါ ေကာင္းေသာလမ္းခြဲျခင္းဆို အမွတ္တရလို႔ သေဘာထားလိုက္ပါ …..ဆိုးေသာလမ္းခြဲျခင္းဆို သင္ခန္းစာလို႔ သေဘာထားလိုက္ပါ ….. ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာလာတဲ့အခါ အမွတ္တရ ဆိုတာ ရယ္စရာပါ …. သင္ခန္းစာ ဆိုတာ သံေဝဂရစရာပါ ….” လို႔ သူရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ျမတ္သူသူဟာ အႏုပညာအလုပ္ေတြအေပၚအေလးထားမႈနဲ႔ က်ရာဇာတ္႐ုပ္တိုင္းကို ပီျပင္စြာသ႐ုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈတို႔ေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အားေပးခ်စ္ခင္မႈကို အျပည့္အဝရရွိထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။လတ္တေလာမွာလည္း ျမတ္သူသူကေတာ့ “သန္းသန္းေဆြ”ဆိုတဲ့ ကာ႐ိုက္တာနဲ႔ “တို႔မမနဲ႔တို႔”ဆိုတဲ့ ဇာတ္လမ္းတြဲမွာ ပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
CeleGabar ပရိသတ္ၾကီးေရ သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသမီးေလး ျမတ္သူသူကေတာ့ (၆)ႏွစ္နီးပါးလက္တြဲလာခဲ့တဲ့ ခ်စ္သူနဲ႔ လတ္တေလာမွာ အဆင္မေျပမႈေတြႀကဳံေတြ႕ေနရေပမယ့္လည္း စိတ္ခြန္အားအျပည့္နဲ႕ ပရိသတ္အတြက္ အနုပညာအလုပ္ေတြပိုမို လုပ္ကိုင္ေနပါတယ္ေနာ္။
“ချူစားလိမ်စားတဲ့သူတွေနဲ့ ဘဝမှာတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ ပိုပို”